ခရစ်တော်နှင့်ပိုမိုခိုင်မာသောရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု Archives | The Blue Book
သခင်ယေရှုရဲ့အချစ်နဲ့ သခင့်ရဲ့တန်ခိုးကြီးခြင်း သခင်ယေရှုကလူတွေကိုအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်းအားဖြင့်သခင့်ရဲ့အချစ်နဲ့ ,တန်ခိုးကြီးခြင်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုကအနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာအနာငြိမ်းခြင်းကိုရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်းကြောင့်အံဩဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုဖတ်ရအောင်။ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်အနာငြိမ်းခြင်းကို ကိုယ်တိုင်ရရှိခံစားဖို့ကျနော်တို့အဆင်သင့်ပြင်ထားရအောင်။ ယုံကြည်ခြင်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်း ဒီအမျိုးသမီးမှာဘာပြသနာတွေရှိနေခဲ့သလဲ? သူမရဲ့အနာရောဂါကို သခင်ဒီယေရှု ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ ဒီအမျိုးသမီးဘာကြောင့် ယုံကြည်ခဲ့တယ် လို့ သင်ထင်ပါသလဲ? သူမကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချပြီး ဘယ်လိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲ? ဒီကျမ်းချက်ထဲမှာသခင်ယေရှုကဘယ်လိုကတိမျိုးပေးခဲ့သလဲ? သခင်ယေရှုရဲ့အချစ် ဒီအဖြစ်အပျက်ထဲမှာ သခင်ယေရှုက,ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဘယ်လိုပြသခဲ့သလဲ? သခင်ယေရှုကလူတွေကိုဘာကြောင့်အနာငြိမ်းစေခဲ့တာလဲ? သခင်ယေရှုရဲ့တန်ခိုး သခင်ယေရှုရဲ့ဝတ်လုံကိုလက်နဲ့တို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဘာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့လဲ? သခင်ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုဘာကြောင့် သတိထားမိသွားခဲ့တာလဲ? ဘာကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးခံစားနေရတဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းသွားခဲ့တာလဲ? သခင်ယေရှု ကဒီအဖြစ်အပျက်မှာ သူ့ရဲ့တန်ခိုးကြီးခြင်းကိုဘယ်လိုပြသခဲ့လဲ? သခင်ယေရှုဟာ ဒီနေ့အချိန်မှာလဲအနာငြိမ်းခြင်းလုပ်ဆောင်နေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဆွေးနွေးရအောင် သင့်အသက်တာမှာခံစားခဲ့ရတဲ့အနာငြိမ်းခြင်းအကြောင်းကို သက်သေခံပေးနိုင်မလား? လက်တွေ့အသုံးချခြင်း ကျန်းမာခြင်းကိုလိုအပ်နေတဲ့တစ်စုံတယောက်များရှိနေမလား? သခင်ယေရှုထံကနေ သူရဲ့အချစ်နဲ့အနာငြိမ်းခြင်းတန်ခိုးကိုကျနော်တို့ ယခုပဲတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ သင့်အပေါ်အနာငြိမ်းခြင်းသက်ရောက်လာဖို့ ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်ကျမ်းပိုဒ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစား ပြီး အဲ့ဒီကျမ်စိးပိုဒ်ကိုစိတ်ထဲမှာဆင်ခြင်ပါ။(ဥပမာ- ဟေရှာယ ၅၃: ၅,မဿဲ ၂၁:၂၂၊ ယာကုပ် ၅ : ၁၆) ဒီလိုဆုတောင်းရအောင် Lord Jesus, I thank You that …